Wattio: Ukusetyenziswa kombane we-Smart ekhaya - iGeofumadas
Matshi, 2013 ezintsha
IMicrosiervos ipapashe inqaku kutshanje, ebhekisa kwiprojekthi yokonga amandla kunye nekhaya.
Ngaphandle kokuba yiprojekthi entsha, inomdla ngokwenene; kwaye ukuba oko bakuphakamisayo kuyinyaniso ... kunokutshintsha indlela esibona ngayo amandla.
Esi sihloko sasisoloko sindichukumisa. Ndikhumbula ukuba nonyana wam senze iprojekthi yesayensi ekwibanga lesihlanu. Yayiyindlu encinci, enendawo zokwenyani ngaphakathi. Ulwakhiwo lwayo lwaluthobekile, ibhokisi yomshicileli weKakak othi endleleni uphume unesiphene, uphahla lwibhokisi yepitsa yangeCawa, kunye netoythi ezingaphakathi ilungiselelwe njengefanitshala. Ngencasa elungileyo, ipeyinti ye-acrylic kunye nomnqweno wokuphumelela uyenze yabukeka.
Ubomi bovavanyo belukhanyiso kunye namancedo. Ngocingo siphethe umgca wokutshintsha ophahleni apho sibonisa:
Yimalini enokugcinwa; Ukuba sisebenzisa i-iron kanye ngeveki, ukuba endaweni yokufudumeza amanzi kwisitya sisebenzise i-heater, ukuba siyakucima ukukhanya ngesibhengezo sophahla… kwaye sitshintsho ngasinye sicime izibane ezahlukeneyo zendlu.
Ekugqibeleni iprojekthi yaphumelela kwindawo yokuqala, kwaye kwakubuhlungu ukuyitshabalalisa kuba kwakungekho ndawo bayibekelweyo.
Ewe, i-Wattio isasebenza kwingxowa-mali phantsi kwemodeli ye-microfinization, nangona nje sele ilungile banikezela:
Gcina amandla, i-10%, i-25%, i-50%, ikithi kuthi!
Gqibezela i-standby, emele malunga ne-10% yokusetyenziswa kombane.
Thelekisa ukusetyenziswa kwekhaya lethu kunye namanye amakhaya.
Fumana iingxelo malunga nokusebenzisa kwethu amandla kwi-imeyile.
Lawula i-thermostat yakho kunye nezinye izixhobo ezivela kwiselfowuni.
Seta ikhalenda yezixhobo zethu.
Ishedyuli yokwenza kunye nezilumkiso kwizixhobo zethu.
Zibekele iinjongo kwaye ulandelele.
Fumana ingxelo nengcebiso zokonga amandla.
Ukulinganisa ubukho ekhaya xa sikude, njengakuyo imovie «Kwindlu yodwa»!
Kwaye konke oku kuyenzeka ngenxa yezi zixhobo zixhunyiwe kwenye nenye esinokuthi singene kwi-Intanethi:
Ukubeka iliso kumbane
Ibekwe kwipaneli yombane, ilinganisa ukusetyenziswa kwexesha lexesha lesangqa ezintathu.
Isetyenziselwa ukuthelekisa ukusetyenziswa kwendlu yakho nezinye izindlu.
Ungathumela ii-alamu ukuba kwenzeka izinto ezingaqhelekanga.
Ayifuni izixhobo zokufakelwa.
Cofa i switch switchboard ubeke kuyo nayiphi na indawo oyifunayo ngaphakathi kwendlu: eludongeni, etafileni ...
Yeyona minicomputer esebenza neLinux.
Yisango eliqhagamshela izixhobo zenkqubo yeWattio kunye neenkonzo zamafu.
Inezibuko le-USB kwizinto ezahlukeneyo ezenziwayo.
Iplagi ehlakaniphileyo ekulinganisa amandla ombane kwiiplagi.
Susa imo yokulinda.
Ingasetyenziselwa ukulingisa ubukho ekhaya xa ungekho.
Ikhuselo nxamnye nokugcwala kakhulu.
Ukucwangciswa kweveki ngesisombululo semizuzu ye-15.
Kulula ukuyisebenzisa, inevili lokukhetha ubushushu.
Ungayilawula kwi-smartphone yakho nokuba uphi.
Ukufumana iinkcukacha ezithe kratya malunga neWattio; Landela ikhonkco:
Post edlulileyo«Edlulileyo Jonga kwaye ukuguqula iifayile dwg ukusuka iinguqulelo ezahlukeneyo AutoCAD
Post Next I-32 kwiminyaka kamva, qhagamshela iingcingo, ujikelezo olufutshaneOkulandelayo "